Strategy First - Upcoming Classes - EBS MBA
UK နိုင်ငံ Heriot-Watt University, Edinburgh Business School မှ MBA (Batch-5)
၂၀၁၈ ဇွန်လ(၂၃) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်နိုင်သော နိုင်ငံတကာ MBA များတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးမားဆုံး ဖြစ်သော UK နိုင်ငံ Heriot-Watt University, Edinburgh Business School မှ
- Master of Business Administration withaspecialism in Finance
- Master of Business Administration withaspecialism in Marketing
- Master of Business Administration withaspecialism in Human Resource Management တို့ကို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Strategy First Institute မှ တရားဝင်မိတ်ဖက်အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတွင် ယူဆောင်လာခဲ့ပါသည်။
UK, Scotland ရှိ Heriot-Watt University ကို ၁၈၂၁ တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယူကေတွင် န၀မမြောက် သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး အဆင့်မြင့်ပညာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
Guardian 2018 ranking အရ ယူကေ အဆင့် ၂၆ ရှိပြီး QS World's Ranking အရ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့် ၃၂၇ ရရှိထားပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ အစအဆုံးသင်ကြားပါမည်။ ရုံးချိန်လွတ် - ညနေပိုင်းများ၊ စနေနေ့တစ်ဝက်နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် တက်ရောက်ရမည်။
ဘာသာရပ်အားလုံးကို UK မှ တိုက်ရိုက် စာမေးပွဲစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပါသည်။
Revision အတန်းများကို တစ်ဘာသာလျှင် ပေါင် ၃၀၀ မှ ၆၀၀ ထပ်မံ ပေးသွင်းပြီး UK, Malaysia နှင့် Dubai တို့တွင် Revision Class များတက် ရောက်နိုင်ပြီး Heriot-Watt University Campus များတွင် ကျင်းပသော ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို တက်ရောက်ဘွဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။
MBA & MSc Programmes
The MBA has long been regarded as the world's premier business qualification. At the Edinburgh Business School we go one stage further. We allow you to study the subject you want, to ensure that the programme is personal to both you and your career. We also offer some specialist MBAs, each one designed to expand your knowledge and broaden your understanding ofaspecific area.
Applications and Admissions To be admitted to the MBA, you normally needaBachelors degree fromarecognized university (orarecognized professional qualification) and at least three years relevant business experience. If English is not your first language you must also provide evidence of English language proficiency equivalent to IELTS 6.5. Applications will be reviewed and offers made within two week period. Application forms are available online at Strategy First Institute website.
MBA တက်ရောက်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
1. ဘွဲ့ရရှိပြီး၊ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်၊ IELTS band (6.5) ရရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. အင်္ဂလိပ်စာလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံပြီး ဘွဲ့မရှိသော်လည်း အတွေ့အကြုံရင့်သော လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ၀င်ခွင့် စဉ်းစားပေးပါသည်။ ပထမ Module သုံးခု အောင်မြင်မှသာ ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
3. IELTS မရှိပါက အင်္ဂလိပ်စာ စစ်ဆေးပေးပါသည်။
Each course is assessed byathree-hours examination, set and graded by Edinburgh Business School. When you feel you have mastered your subject and are ready to be rested in your knowledge, you simply pay for you exam take it. There are two exam sessions every year, in June and December at one of more than 400 locations worldwide.
သင်တန်းကြေးများကို AYA Bank ၏ Education Loan မေလျှာက်ထား၍ အရစ်ကျ
အောက်ပါ Link တွင် လျှောက်နိုင်ပါသည်။
Apply Now - OBU